Business Email for 1$ - Zeagwat, Inc.
သင့်လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ Business Email Account တစ်ခုကို တစ်လလျှင် 1399 Ks. ဖြင့်၀ယ်ယူ လိုက်ပါ…..
Business Email ဆိုတာဘာလဲ?
Business Email Address ဆိုတာက သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ Brand နာမည်နဲ့အတူတည်ဆောက်လို့ရတဲ့ သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် အီးမေးလ်တွေပါပဲ။ ဥပမာ – ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Website က www.zeagwat.com ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Custom Email တွေက sales@zeagwat.com, info@zeagwat.com အစရှိတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကဲဒီလောက်ဆိုရင် အကြမ်းအားဖြင့်နားလည်လောက်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လိုအပ်ရသလဲဆိုတဲ့ အချက်လေးတွေကို ကြည့်လိုက်ရအောင်…
လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက် ဆိုရင်@gmail.com သို့ @outlook.com ဆိုတဲ့အီးမေလ်းတွေဟာ Professional လုံး၀မဆန်ပါဘူး
သင်ဟာ Gmail မှာအီးမေလ်းအကောင့် အလကားရနေတာပဲ ဘာလို့ဒီလိုမျိုးပိုက်ဆံထပ်ပြီးအကုန်ကျခံရမှာလဲလို့ တွေးနေတယ်ဆိုရင် အောက်ကဥပမာလေးကို ပုံဖော်ကြည့်လိုက်ပါ။သင့်လုပ်ငန်းနာမည်က MyDream ဆိုပါတော့..သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ အရောင်း၀န်ထမ်းရဲ့ အီးမေးလ်ကို နှိုင်းယှဥ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Customer တွေက ဘယ်ဟာကိုပိုယုံမလဲ?
Mghla21@gmail.com လား… ဒါမှမဟုတ် sales@myexample.com ကိုလား?Gmail, Outlook အစရှိတာတွေဆီကရတဲ့ အခမဲ့ အီးမေလ်းတွေကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် သင့် Customer တွေကို ယုံကြည်မှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာ များစွာအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေလို့ သင့် Brand ရဲ့ Impression ကိုလည်းအထူးပင်ကျဆင်းစေပါတယ်။သင့်မှာ Domain လိပ်စာတစ်ခုရှိနေပြီဆိုရင် သင့်အတွက် Business Email ဟာ လက်တစ်ကမ်းအကွာမှာရှိနေပါပြီသင့်လုပ်ငန်းအတွက် သင့်မှာ www.example.com အစရှိတဲ့ ကိုယ်ပိုင်လိပ်စာတစ်ခုရှိနေပြီဆိုရင် သင်ဟာ Business Email ကိုအခမဲ့အသုံးပြုနိုင်ဖို့ လက်တစ်ကမ်းပဲလိုပါတော့တယ်။
သင့်လုပ်ငန်းကအလုပ်လုပ်နေတဲ့ ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ယောက်အလုပ်ထွက်သွားခဲ့ရင်တောင်မှ, Email တွေကိုသင်ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်….သင့်လုပ်ငန်းက Marketing ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်အလုပ်ထွက်သွားတယ်ဆိုပါတော့…. သင်ဟာ Business Email ကိုအသုံးမပြုခဲ့ဘဲ Marketing ၀န်ထမ်းရဲ့ Personal Email သို့မဟုတ် အခမဲ့ရတဲ့ Gmail ကိုအသုံးပြုခဲ့မယ်ဆိုရင် အလုပ်ထွက်သွားတဲ့၀န်ထမ်းနှင့်အတူ သင့်အချက်အလက်တွေပါသွားဖို့ ရာခိုင်နှုန်းအရမ်းကြီးမားလှပါတယ်။ တချို့ဆိုရင် လုပ်ငန်းရဲ့ Gmail Password တွေကိုပါပြောင်းသွားတတ်တဲ့အတွက် ကြီးမားတဲ့နစ်နာမှုဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
အခမဲ့ အသုံးပြုလို့ရတဲ့ အီးမေလ်းလိပ်စာတွေမှာ နာမည်တူတာတွေများတဲ့အတွက် သင်လိုချင်တဲ့နာမည်တစ်ခုကို ရဖို့အရမ်းပဲခက်ခဲလှပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Business Email မှာကတော့ သင်ကြိုက်တဲ့ နာမည်ကို သင်ကိုယ်တိုင် ပေးလို့ရလို့ လုပ်ငန်းအတွက်ရော Email လိပ်စာကို မှတ်မိဖို့ရောအတွက်ပါများစွာအထောက်အကူပြုပါတယ်…..
သင်ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့ အီးမေးလ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကြော်ညာမပါ ၀င်ပါဘူး….
Gmail အစရှိတဲ့ အီးမေလ်းတွေဘာလို့ အခမဲ့ရလဲ? ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ပေးတဲ့ အီးမေလ်းတွေထဲကို ကြော်ညာတွေထည့်လို့ရလို့ အခမဲ့ပေးတာပါ။ နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ ပို့ထားတဲ့ အီးမေလ်းအချက်အလက်တွေအပေါ်မူတည်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ကြိုက်မယ်ထင်တဲ့ ကြော်ညာတွေကို ထည့်ပြီး ၀င်ငွေရနေတာပါ။ သင့်အီးမေလ်းမှာတော့ သင်ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်တဲ့ အတွက် ကြော်ညာကင်းရှင်းစွာ Privacy ရှိရှိအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။